Gossip News | News Filmy | Page 6
कति जायज ?
July 1, 2014 7:02 am
चर्चामा रहेका फिल्मकर्मीहरुलाई राष्ट्रिय अवार्डमा निम्तो पुगेन । तर राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहका बीच एक ब्यक्तिलाई न्यूज फिल्मीले देख्दा तीन छक्क पर्‍यो । मुख्यत: यस बर्षको राष्ट्रिय अवार्डको मुख्य असन्तुष्टी भनेकै पर्याप्त मात्रामा फिल्मकर्मीहरुलाई निम्तो नपुग्नु हो । त्यस माथि विशिष्ट शैलीमा आयोजित अवार्ड समारोहमा नामै नचलेका यी ब्यक्तिलाई देख्दा आलोचना गर्नेहरुले अझ ठाँउ पाएका छन् ।
भदौ २० ले गर्दा दुई हिरोको सित युद्ध सुरु
उदाउने क्रममा रहेका दुई हिरोका लागि भदौ २० को मिति अत्यन्त पखाईमा रहेको मिति हो र सोही मितिका कारण हिरो निरज बराल र सुवास थापाको सित युद्ध सुरु भएको छ ।
OMG: भुवन केसी पूर्व पत्नीको यस्तो लिपलक फोटो
यो कुनै फिल्मको दृश्य हैन । सुपरस्टार भुवन केसी पूर्व पत्नी सुस्मिता बमजनको लिपलक फोटोलाई न्यूज फिल्मीले फेला पारेको छ । सोहन नाम गरेका एक भारतीय ब्यापारीसंग दोश्रो विहे गर्ने तयारीमा समेत रहेकी सुस्मिताको यो फोटो हेर्दा लाग्छ उनी गहिरो प्रेममा छिन् ।
भुवन केसीसंग छोरा अनमोल क्रुद्ध भएको संकेत !
ओफा अवार्डमा डेब्यू एक्टरको अवार्ड उचाल्न स्टेजमा पुग्दा अनमोल केसी पिता भुवन केसीका अगाडी खुशीको मुडमा थिएनन् । आँखै अगाडी छोराले अवार्ड पाएको दृश्य देख्दा निकै हर्षित एवं भावुक बनेका भुवन केसीलाई छोराले थ्याङक यू क्रेडिट नदिएको देख्दा माहोल गसिपमा बन्यो ।
हिरोइनसंग प्रोड्यूसर नजिक कि प्रोड्यूसरसंग हिरोइन ?
यी दुई ईन्डष्ट्रीमा भर्खरै प्रवेश गरेका प्रोड्यूसर र हिरोइन हुन । गत शुक्रबार रिलिज भएको ‘दमदार’ फिल्मका प्रोड्यूसर सुमन बिष्ट र आउने हप्तादेखि रिलिज हुने ‘पीपल’ फिल्मकी हिरोइन शुष्मा अधिकारी यो समय निकै नजिक छन् । सुत्रका अनुसार ६ महिना अघि एक म्यूजिक भिडियो खेल्ने क्रममा उनीहरुको निकटता बढेको हो । भिडियो त कारणबस बन्न सकेन तर दोस्ती चाहि शुष्मा र सुमनको गज्जबले जम्न पुगेको छ ।
उद्धिनलाई बधाई दिन यसरी आएका थिए कर्म र नम्रता
निर्देशक निश्चल बस्नेत र हिरोइन ऋचा शर्माको निकटताको खबर कुनै नौलो हैन तर डन ब्यायफ्रेण्ड प्रेम घलेसंग सम्बन्ध बिग्रिएपछि नम्रता श्रेष्ठ हिरो कर्म संगै देखिदा न्यूज फिल्मी तीन छक्क पर्‍यो । हुन त नम्रता र कर्म पुराना साथी हुन तर चलचित्र संघको ईलेक्सन रिजल्टको खुशीयाली पार्टीमा उनीहरुको हाऊभाऊ देख्दा लाग्थ्योे दालमा केही मिसिएको छ ।
प्रियंकाको ईज्जत केकीले छोपिन
फेसन कन्सियस हिरोइनको रुपमा समेत चिनिएकी प्रियंका कार्कीलाई बिहिबार साँझ भने आफ्नै पहिरनले धोका दियो । कबड्डी प्रिमियर शोमा पुगेकी प्रिंयकाको ड्रेसले धोका दिन पुग्दा उनको ईज्जतलाई अर्की हिरोइन केकी अधिकारीले छोपिदिएकी थिईन् जुन दृश्य संगैको तस्बिरमा तपाईले हेर्न सक्नु हुन्छ ।
दोश्रो प्रेममा पनि ब्याडलक : हिरोइन हर्षिकाको फेरी भयो ब्रेकअप
April 1, 2014 6:22 am
रंगीन दुनिया यस्तै छ कहिले को संग सम्बन्ध जोडिन्छ अनि कहिले तोडिन्छ थाहाँ नै हुदैन । र यस्तै भएको छ हर्षिका श्रेष्ठको हकमा पनि । फिल्म एडिटर विपिन मल्लसंग सम्बन्ध टुटेपछि गायक एवं म्युजिक भिडियो निर्देशक बादल प्रसाईसंग सम्बन्ध जोडेकी हिरोइन हर्षिका श्रेष्ठको नयाँ प्रेम पनि टुटेको हो ।